I-China CGX261P Glass Straight Line Beveling Machine enezakhi zokulawulwa kwe-PLC nabaphakeli | ISUNKON
Umshini we-CGX261P Glass Straight Line Beveling one-PLC Control
■Isisekelo, ugongolo, ifreyimu ejingayo, ikholomu emile nekhanda lokugaya kungezinto zokusakaza (ezifakiwe ukuze kuvinjelwe ukusonteka) .Zinokumelana okwedlulele nokuhuzuka nokusonteka, kanye nezakhiwo ezinhle kakhulu zokubamba.
■Umshini we-CGX261P Glass Straight Line Beveling onama-motors ayi-9 ofanele ukucutshungulwa wotho & onqenqemeni olungaphansi lweshidi lengilazi ngobukhulu obuhlukahlukene nobukhulu.
■Ukugaya indawo, ukugaya okuhle nokufaka iphoyila kungaphothulwa ngesikhathi esisodwa. ukuqinisekisa ukunemba nokupholisha ukukhanya okufinyelela kumphumela wesibuko.
■I-beveling grinding head motor ivela kuhlobo lomhlaba jikelele: ABB, izingxenye zikagesi zivela eSchneider, futhi ibuye ibe nomugqa we-Aluminium alloy scaffolding kanye ne-Synchronous belt transmission.
■Imishayo eyisisekelo, ngaphambili nangemuva, imibhede namakhanda okugaya ingezinto zokuphonsa (ezifakiwe ukuze kuvinjelwe ukusonteka), Ezingathwala imithwalo emikhulu futhi inokusebenza okuzinzile.
■Iyimishini yokugaya ingilazi ehamba phambili yokucubungula ingilazi yezandla, ukuhlobisa nefenisha yengilazi, iminyango namawindi, isibuko sokugezela nesibuko sezimonyo, okuwumshini osetshenziswa okuningi.
Ubukhulu Beglasi 3-19mm
Min Icutshungulwe Usayizi 100 * 100mm
Usayizi Osetshenzisiwe Wobukhulu 2500 * 2500mm
Inqubo Speed 0.5-5m / iminithi
Amandla Aphelele 21.5kw
Ukuhlalwa komhlaba 6500 × 1300 × 2500mm
Hlakulela umkhiqizo odumile “QIANGZHU”Ibhokisi lamagiya ukwenza umshini uzinze kakhudlwana.
02 Isikrini sokuthinta i-Siemens PLC
Hlakulela ISIEMENS PLC bese uthinta isikrini ukukhombisa ukushuba kwengilazi, isivinini kanye neminye imininingwane okulula ukusebenza.
03 USchneider Electric
Hlakulela Schneider ugesi ngokuhlelwa kahle komugqa ezenza ukuphepha komshini futhi kusebenze kahle.
04 Ikhwalithi Ephezulu Yokugcina Isikhathi
Hlakulela hikhwalithi isikhathi sebhande ukudlulisa ingilazi, enempilo yensizakalo ende futhi enembile.
05 ABB Ukugaya ama-Motors
Hlakulela brand odumile ABB okokugaya izinjini, okuhlala isikhathi eside nokwethenjelwa ukusetshenziswa.
06 Imishini Yokuhlanza Amapedi Emuva
Hlakulela pads ezingemuva idivayisi yokuhlanza ukuqinisekisa ukuthi amapuleti ahlanzekile futhi umphumela wokupholisha ungcono.
07 Itanki lamanzi elingenalutho
Ukwamukelwa kwe 2 isiqeshana se- ikhwalithi yamanzi angenansimbi ithangi .Eyodwa ngosayizi wokujikeleza kwamanzi ngo-1400 * 500mm. Enye yokubonga amanzi kwe-cerium yokubonga ngobubanzi bomsebenzi wokuxuba ngo-600 * 600mm.
Umshini we-Beveling ophathwa ngesandla
Umshini Wensimbi Wensimbi
Umshini Wokwenza Isibuko
Encane Glass Beveling Machine
CGX371 ingilazi iqonde-umugqa Beveling umshini Wit ...
CGX371SJ Glass Iqonde Line Beveling Machine W ...
Umshini Wokugaya Amatshe Wama-45, Umshini Wokuhlela we-Stone 45 Degree, Umshini We-Glass Miter, Ingilazi eguquguqukayo iMiter Machine, Ifenisha Ingilazi Edging Machine, Izinsimbi Zokugaya Amatshe,